मन्त्रीमाथि मानहानीको मुद्दा पनि लगाउन सक्छौँ- डा. छेत्री – खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङमन्त्रीमाथि मानहानीको मुद्दा पनि लगाउन सक्छौँ- डा. छेत्री
May 7, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ 0
राजनीति एक ठाउँमा छ, जाति एक ठाउँमा। जब जाति र समुदायको सवाल आउँछ, पहाडका नेताहरूको आवाज सधैँ एक बनेको छ। विमल गुरूङ, डा हर्कबहादुर छेत्रीको निम्ति सधैँ राजनैतिक र सैद्धान्तिकरूपमा विपक्षी हुन्। विमल र हर्कबीचको राजनैतिक द्वन्द्वले दार्जीलिङ पहाडमा नै निक्कै ठूलो हलचल ल्याउने गर्छ। राजनैतिकरूपले कट्टर दुश्मन विमल गुरूङ र उनका अरू नेताहरूको नाम नै काडेर जब राज्यका मन्त्री इन्द्रनील सेनले उनीहरूलाई बक्सामा हालेर जिल्ला कटाउने मन्तव्य दिए, डा. हर्कबहादुर छेत्री पनि त्यसलाई सुनेर चुप बस्न सकेनन्।
‘यो केवल मन्त्रीको वयान होइन,’ डा. छेत्रीले भने, ‘यो तृणमूल काङ्ग्रेसको पहाड र पहाडका मानिसहरूलाई हेर्ने मानसिकता हो।’
मन्त्रीको भाषामा धेरै कुरा लुकेको बताउने डा. छेत्री तृणमूल काङ्ग्रेसको नियतमा शङ्का गर्छन्। ‘राजनीतिमा धेरै कुरा हुन्छ, तर इन्द्रनील सेनले जे पनि भने, त्यो नितान्तै निन्दनीय हो,’ उनले थपे, ‘उनी विरुद्धमा जापले मानहानीको मुद्दा पनि लगाउनसक्छ।’
बिहेको जन्ती र मर्दाको मलामी कलकत्ते होइनन्
अर्कोतिर क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अरूण घतानीले पनि मन्त्री इन्द्रनील सेनको मन्तव्यलाई ‘तृणमूल काङ्ग्रेसको राजनैतिक संस्कार, पहाड़वासीप्रतिको सोंच, हैकमवादी चरित्र र चरम अहङ्कार’ भनेका छन्। ‘यस्तै तत्वहरूको आगमनले हाम्रो ठाउँमा हामी नै भविष्यमा सुरक्षित छैनौं भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ, शरीरमा जातीय प्रेम, पहाड़प्रति माया गर्ने समग्र नागरिकले विरोध त गर्नै पर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्ता तत्वलाई पहाडमा पश्रय दिनु हुँदैन।, हाम्रो बिहेको जन्ती र मर्दाको मलामी कलकत्ते होइनन्।’